Galmudug ayaa gacanta ku dhigtay Markab laga leeyahay Shiinaha | KEYDMEDIA ENGLISH
Galmudug ayaa gacanta ku dhigtay Markab laga leeyahay Shiinaha
Galmudug ayaa gacanta ku dhigtay Markab laga leeyahay dalka Shiinaha kaas oo si sharci darro ah uga kalluumeysanayay agagaarka xeebta Hobyo.
HOBYO, Soomaaliya - Sarkaal ka tirsan maamulka Galmudug ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha maamulkaas ay gacanta ku dhigeen markab si sharci darro ah uga kalluumeysanayay biyaha badweynta Hindiya ee ku dhow degmada qaddiimiga ah ee Hobyo.
Markabkaan oo sitay calanka Shiinaha ayaa muddo dhowr bilood ah waxa uu si sharci darro ah uga kalluumeysanayay biyaha Galmudug, isagoo aan heysan shatiga kalluumeysiga, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada badda ee maamlkaas.
Taliyaha Ilaalada Xeebta Hobyo, Cabdiraxmaan Cali Dhiblaawe ayaa sheegay in 17 Kalluumaysato ah oo u kala dhashay dalalka China, Indonesia iyo India ay saarnaayeen markabka, kaas oo ay ciidamadu ku rad joogeen ilaa horaantii sanadkan.
Markabkan kalluumeysi ee laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa waxyeelo u geystay Doomo kala duwan oo ay lahaayeen Kalluumeysato Soomaaliyeed kuwaas oo Maamulka ku wargeliyay markabkaan. Dowladda Shiinaha kama aysan hadlin qabsashada markabka.
Cabdiraxmaan Cali Dhiblaawe, wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah maraakiibta shisheeye ee sida sharci darada ah uga kalluumeysta xeebaha gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya oo horay u ahaa goob ay ku badan yihiin burcad badeedda.
Howlgalka badda ee uu ka dhawaajiyay Dhiblaawe, ayaa kusoo beegmaya xilli doonyaha kalluumeysiga ay ka cabanayaan maraakiibta shisheeye ee xaalufka ku haya xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo xilliyada qaar dhibaatooyin kala duwan u geysta.